Petkit Pura X၊ သင့်ကြောင်အတွက် အမှိုက်ပုံး | Gadget သတင်း
Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် | 13/12/2021 14:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 15/12/2021 13:00 | ယေဘုယျ, reviews
မင်းမှာ ကြောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုရင် အမှိုက်ပုံးဟာ တကယ့်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ မင်းသိပါတယ်၊ မင်းမှာ နှစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ပိုများရင် ငါမင်းကို ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး။ သို့သော်၊ သင့်အတွက်နှင့် သင့်ချစ်သော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် ဘဝပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက် Actualidad Gadget တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်ထားသော အိမ်ရွေးချယ်စရာများ အမြဲရှိသည်ကို သင်သိထားပြီးဖြစ်သည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော Petkit Pura X သည် သူ့ကိုယ်သူ သန့်ရှင်းစေပြီး အံ့သြဖွယ်အင်္ဂါရပ်များစွာပါရှိသော လိမ္မာပါးနပ်သော အမှိုက်ပုံးကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ မင်းရဲ့ကြောင်လေးရဲ့ အမှိုက်ပုံးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတဲ့ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့အလုပ်အတွက် ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်နိုင်မလဲဆိုတာကို ငါတို့နဲ့အတူ ရှာဖွေကြည့်လိုက်ပါ၊ မင်းနှစ်ယောက်စလုံးက အဲဒါကို သဘောကျမှာပါ၊ မင်းလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ အချိန်မီရလာမှာ သေချာပါတယ်။
2 အဓိက functions
3 ဆက်တင်များနှင့် sandbox နှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန် နည်းလမ်းများ
အထုပ်ကြီးကြီးနဲ့ ကြုံနေရလို့ စိတ်ညစ်ရတာ ပြောရမယ်ဆိုရင် အရမ်းကြီး။ သဲပုံးဖြစ်ရန် သင်စိတ်ကူးနိုင်သည်ထက် အတိုင်းအတာသည် အလွန်ကြီးမားသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် 646x504x532 မီလီမီတာ အတိုင်းအတာရှိသည့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အဝတ်လျှော်စက်တစ်ခုကဲ့သို့ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် မြင့်မားသောကြောင့် ၎င်းကို မည်သည့်ထောင့်တွင်မဆို အတိအကျထားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။. သို့သော်လည်း ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းသည် ၎င်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ရှိပြီး ထိုင်ခုံအနည်နေရာတွင် မီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့ရှိသော အောက်ပိုင်းမှ လွဲ၍ အဖြူရောင် အပြင်ပိုင်းအတွက် ABS ပလပ်စတစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။
အပေါ်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဆောက်ထားသည့်အရာများကို ချန်ထားနိုင်သည့် အနည်းငယ်အဝိုက်ပုံစံ အဖုံးပါရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အချက်အလက်ပြသမည့် LED စခရင်ငယ်တစ်ခုအပြင် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုခလုတ်နှစ်ခုသာရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ အထုပ်တွင် ကြောင်ဖယ်ရှားနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သဲအစအနများကို စုဆောင်းနိုင်စေမည့် ဖျာငယ်တစ်ခု ပါ၀င်သည် ။ ထုတ်ကုန်၏စုစုပေါင်းအလေးချိန်သည် 4,5Kg ဖြစ်သောကြောင့် အလွန်ပေါ့ပါးခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကောင်းမွန်သော ပြီးပြည့်စုံမှုရှိပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ဒီဇိုင်းတစ်ခု ရှိသည်၊ မည်သည့်အခန်းတွင်ပင်မဆို အတော်လေးကြည့်ကောင်းသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း၊ ၎င်း၏ ကွပ်မျက်မှုသည် အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုကိစ္စရပ်တွင် ပြဿနာမရှိနိုင်ပါ။
အမှိုက်ပုံးတွင် ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းကို ကြည့်လျှင် ဒရမ်တစ်ခုပေါ်တွင် (ကြောင်၏အမှိုက်သရိုက်များ တည်ရှိပြီး ၎င်းသည် သူ့အလိုလို သက်သာရာရပါမည်)ကို အခြေခံ၍ သန့်ရှင်းရေးစနစ် ပါရှိသည်။ သန့်ရှင်းရေးစနစ်က တော်တော်ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက် နည်းပညာပိုင်းနဲ့ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလတ်တွေကို နားမလည်ပါဘူး။ Petkit Pura X ကကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးဆောင်သောနောက်ဆုံးရလဒ်များတွင်၊ ဤကဏ္ဍတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သောစမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူအတော်လေးပျော်ရွှင်ပါသည်။
သဲဘောက်စ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ အလိုအလျောက် သန့်ရှင်းရေးစနစ် ပါရှိသောကြောင့် ၎င်းတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လည်ပတ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ မစိုးရိမ်သင့်ဘဲ၊ သို့သော် ၎င်းတွင် အလေးချိန်နှင့် ရွေ့လျားမှု နှစ်မျိုးစလုံးတွင် အာရုံခံကိရိယာ အမျိုးမျိုး ပါရှိပြီး Pura Petkit X ကို တားဆီးပေးမည် ဖြစ်သည်။ jack သည် အလွန်နီးကပ်သည်ဖြစ်စေ အတွင်းပိုင်းကို လည်ပတ်စေပါသည်။ ဤကဏ္ဍတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြောင်လေးများ၏ ဘေးကင်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို အပြည့်အဝ အာမခံပါသည်။
Jack inlet အချင်း- 22 စင်တီမီတာ
သင့်လျော်သောကိရိယာအလေးချိန်- 1,5 နှင့် 8 ကီလိုဂရမ်အကြား
အများဆုံးသဲပမာဏ- 5L နှင့် 7L ကြား
ချိတ်ဆက်မှုစနစ်များ- 2,4GHz WiFi နှင့် Bluetooth
အထုပ်တွင် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အတွဲလိုက်ပါဝင်သည်၊ ၎င်းတို့သည် အရည် အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားပေးသည့် သံဗူးလေးခုနှင့် အညစ်အကြေးများကို စုဆောင်းရန် အိတ်အထုပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါသည်။ မစင်ပုံးသည် ထူးခြားသောအရွယ်အစားရှိသော်လည်း သေးငယ်သောအရွယ်အစားအိတ်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုရန်မှာ ပြဿနာများစွာရှိမည်မထင်ပါ။ အိတ်များနှင့် အနံ့အသက်ပျောက်ဆေးများကို သီးခြားစျေးနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူပါ။ အတော်လေးအကြောင်းအရာ Petkit ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ PETKIT အားဖြည့်ဆေးများ....
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်း၏ ယေဘူယျအရည်အသွေးနှင့် Petkit Pura X ၏ကျန်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေနပ်အားရခဲ့ပြီး ယခုအခါ အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို အပလီကေးရှင်းနှင့် မတူညီသောပရိုဂရမ်ရေးစနစ်နှစ်ခုလုံးအတွက် အပ်နှံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နှင့် smart sandbox ဆက်တင်များ။
ဆက်တင်များနှင့် sandbox နှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန် နည်းလမ်းများ
၎င်းကို configure လုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရိုးရှင်းစွာ အပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရပါမည်။ Petkit နှစ်မျိုးလုံးအတွက် ရနိုင်ပါသည်။ အန်းဒရွိုက် လျှင်အဖြစ် iOS ကို လုံးဝအခမဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပလီကေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးမြောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ဤစက်ပစ္စည်းကို ထည့်သွင်းရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ Pura X ၏ခလုတ်များဖြင့် ညွှန်ကြားချက်အချို့ကို လိုက်နာရန် တောင်းဆိုလိမ့်မည်၊ သို့သော် သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၊ အကြံပြုလိုသည်မှာ Pura X ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube ချန်နယ်သို့ အပ်လုဒ်တင်ထားသော ဗီဒီယိုကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်
အပလီကေးရှင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sandbox သို့သွားသည့်အချိန်များ၏ အသေးစိတ်မှတ်တမ်းကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့်အပြင် ၎င်းတို့၏ သန့်ရှင်းရေးအချိန်ဇယားများ၊ အလိုအလျောက်နှင့် လက်စွဲနှစ်မျိုးစလုံးကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းကိုပိတ်နိုင်သည်၊ ချက်ခြင်းသန့်ရှင်းရေးဆက်လုပ်နိုင်ပြီး အနံ့အသက်များကို ချက်ချင်းဖယ်ရှားရန် စီစဉ်နိုင်သည်။ ကျန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက် လျှောက်လွှာမှာရနိုင်တဲ့ «Smart Adjustment» ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ ဤစာရင်းသွင်းမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောင်၏အလေးချိန်ပြောင်းလဲမှုများကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤကြောင်လေး၏အလေးချိန်သည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ချက်ချင်းပြသမည်ဖြစ်သည်။ X စင်အဲဒါက သဲအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကို သတင်းအချက်အလက်တွေ ပေးတယ်၊ အဲဒါကို ပြောင်းရတဲ့အခါ အကြောင်းကြားဖို့၊ အပလီကေးရှင်းမှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်လည်း တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်နှင့် အတူတူပင် Petkit Pura X ပါ၀င်သော တစ်ခုတည်းသော ခလုတ်နှစ်ခုမှ တစ်ဆင့်။
သံသယမရှိဘဲ၊ ဤအရာသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုဟု ထင်ရပြီး၊ သင်သည် ၎င်းကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။ Powerplanet Online သည် စပိန်တွင် ဤနေရာတွင် ထုတ်ကုန်၏တရားဝင်ဖြန့်ဖြူးသူအဖြစ် သို့မဟုတ် အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များမှ တင်သွင်းသည့် ယန္တရားများမှတဆင့်။ သံသယမရှိဘဲ၊ ၎င်းသည်ရွေးချယ်ထားသောရောင်းပွိုင့်ပေါ်မူတည်၍ 499 ယူရိုဝန်းကျင်၊ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကြောင်တစ်ကောင်ထက်ပိုပါက၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အချိန်များစွာကို သက်သာစေနိုင်ပြီး ကြောင်၏တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်၏တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောမဟာမိတ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ . အဲဒါကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို လေးလေးနက်နက် ပြောပြပြီးပါပြီ၊ ထိုက်တန်သလား၊ မထိုက်တန်ဘူးလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ သင့်အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Petkit Pura X သည် သင့်ကြောင်အတွက် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ သန့်ရှင်းစေသော အမှိုက်ပုံးဖြစ်သည်။